Ugu yaraan 15 qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 15 qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
June 15, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Qarax hore Muqdisho. [Isha Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Qof isa soo miidaamiyay ayaa beegsaday xarun ciidan halkaas ay ku jireen askar dhawaan la qoray. Intooda badan dadka qaraxa ku geeriyooday ayaa ahaa ciidan.
Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay masuuliyada, balse maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weeraro kan lamid ah horey u geysatay.
Jabuuti-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta oo Khamiis ah kulan ku yeeshay caasimada Jabuuti ee magaalada Jabuuti. Labada Madaxweyne ayaa ka wadahadlay xoojinta [...]